पाउन कसरी मित्र, जर्मनी मा बैठक जर्मन लागि पत्राचार, संस्कृति र समाज
सबैलाई हुनुपर्छ साथी: संगति साझेदारी गर्न, मजा, मनोरञ्जन, आदि. राम्रो पनि छ भने तपाईं एक मित्र को धेरै छ ।, तपाईं हुनेछ, प्रोत्साहन र सान्त्वना तपाईं यो आवश्यक गर्दा. साथै, एक मित्र मा अर्को देश, यस्तो जर्मनी पनि धेरै रोचक छ । प्रयास गर्न पाउन नयाँ मित्र विभिन्न साइटहरु मा. आफ्नो संभावना उच्च हो भने, तपाईं दर्ता मा सबै, यो पोर्टल, जो भन्दा बढी हुन्छन् हजार प्रयोगकर्ता. साइट प्रदान गर्दछ एक विस्तृत जाँच सबैलाई, यो मात्र आवश्यक छ संकेत थर, नाम, जन्म मिति, ईमेल र हुलाक ठेगाना । यो एक राम्रो मौका छ गर्न मित्र पाउन, किनभने साइट थियो भन्दा बढी हजार.
त्यसपछि भर्न आफ्नो प्रोफाइल. अधिक जानकारी तपाईं प्रदान आफैलाई बारेमा, को ठूलो भनेर चाँडै तपाईं हुनेछ अर्को, र शायद अधिक एक पेन पाल जर्मनी मा. परियोजना गर्न सक्छन् जर्मन प्रयोगकर्ता र जर्मन वक्ता । कलम मित्र, र समृद्ध मेरो ज्ञान को जर्मन भाषा छ । वेबसाइट मा तपाईं पूरा गर्न मौका छ, अन्य प्रयोगकर्ता, तर पनि सिक्न नवीनतम समाचार संस्कृति, राजनीति र खेल. जर्मनी । तपाईं पूरा गर्न सक्छन् रोचक मान्छे, सिक्न घटनाहरू र समाचार को हैम्बर्ग र प्राप्त को एक धेरै सुखद छापे को नयाँ परिचितों, सधैं रोचक व्यक्ति संग कुरा गर्न बस्दा यो देश मा. जोगिन रोमान्टिक यस्तो संचार राम्रो छ, यो प्रयोग गर्न को मौका द्वारा प्रदान साइटहरु. यी स्रोतहरू को लागि डिजाइन गर्दै छन् मान्छे संसारभरि देखि चाहने द्वारा कुराकानी गर्न पत्राचार. प्रयोगकर्ता सबैभन्दा भाग लागि, विद्यार्थीहरूको को वरिष्ठ वर्ग, विद्यार्थीहरूको छ । दर्ता गर्न यी साइटहरु प्रयोग. चयन त्यसपछि उपयुक्त उम्मेदवार लागि भने आफ्नो शहर को एक छ विश्वविद्यालय संग एक विदेशी भाषा विभाग, सम्पर्क को लागि त्यहाँ मदत । अक्सर दुवै विद्यार्थी र शिक्षकहरू संग सम्पर्क मा प्रतिनिधिहरु को ती देशहरुमा जसको भाषा तिनीहरूले अध्ययन हो. विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम छ । कहिलेकाहीं विश्वविद्यालयहरु पनि संगठित को भर्ती गर्न स्वयंसेवकहरु मा जान गर्मी विदेश प्रदर्शन गर्न अकुशल काम, उदाहरणका लागि, वा जोडी. यस्तो स्वयंसेवकहरु दिइन्छ आवास मा एक जर्मन परिवार, सही वातावरण लागि विसर्जन मा भाषा वातावरण र सुधार भाषा छ । यी फाइदा लिन क्षमताहरु को लागि खोज मा जर्मन प्रेमिका, जो तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ जारी संचार पछि पनि आफ्नो घर फर्कने छैन । एक पटक फ्रेंच लेखक डे सेन्ट, भन्नुभयो: विश्व अधिक लक्जरी भन्दा लक्जरी को मानव संचार’. दुर्भाग्यवश, आधुनिक जीवन छ कि यस्तो मान्छे झन् टाढिएको देखि प्रत्येक अन्य । अन्यसरोगेट भर्चुअल संचार बिस्तारै ठाँउ वास्तविक मानव सम्बन्ध छ । तर, अर्कोतर्फ, आधुनिक इन्टरनेट प्रदान एक साँच्चै अनुपम मौका पाउन जस्तै-दिमाग र नयाँ हुन सक्छ, केही समय पछि, आफ्नो राम्रो मित्र, वास्तविक जीवन मा. यो पर्याप्त छ गर्न राम्रो देखाउन हुनेछ, र केही लगनशीलता छ । एक ठूलो फाइदा छ भन्ने तथ्यलाई मा तिमीलाई भेट्न अघि तपाईं वास्तविक जीवन मा, तपाईं प्राप्त गर्न मौका छ थाह राम्रो मान्छे, प्रमाणित गर्न समानतालाई आफ्नो चासो र आपसी सहानुभूति । साथै, नेटवर्क संचार गर्न अनुमति दिन्छ बाँध प्राथमिक सम्पर्क संग, एक धेरै मान्छे को ठूलो संख्या, बीचमा कसको हुनेछ केही रोचक तपाईं को लागि व्यक्तिहरूलाई, र ब्लग (भर्चुअल). पनि यदि तपाईं कुनै खास शौक, पक्कै त्यहाँ छ एक सीमा को गतिविधिलाई र सोख छ । को खोज मा नयाँ भर्चुअल मित्र हुनुपर्छ द्वारा निर्देशित यी. क्रम मा पाउन फोरम, प्रकार मा एक खोज इन्जिन प्रश्न संग आफ्नो शौक र शब्द»फोरम». सूची ब्राउज साइटहरु र चयन तिनीहरूलाई ती हुन्छन् जो सक्रिय फोरम मा नै विषय हो । विचार सधैं सुरु गर्न हेर्नुहोस् यी स्रोतहरू । जब तपाईं पाउन तपाईं रुचि हो, मंच बनाउन एक खाता र पढ्न सुरु सन्देशहरू, ध्यान दिएर आफ्नो लेखक.
यदि कुनै छलफल तपाईं रुचि हो, प्रयास सुरु गर्न संचार
समय तपाईं हो राम्रो संग छ । मा निर्भर गर्दछ, आफ्नो उमेर र चासो क्षेत्र, चयन उपयुक्त सामाजिक सञ्जाल र मा लग. सम्भव विस्तार पूरा संग नै चासो छ ।, मार्फत खोज विकल्प, तर एक अनुरोध समावेश गर्न आफ्नो वास्तविक सोख छ । चयन केही उपयुक्त समूह सुरु गर्न, कुराकानी साथ समकक्षी तिनीहरूलाई मा
← देखि मानिसहरू जर्मनी - डेटिङ
बिना दर्ता गर्न इश्कबाज वा चैट फ्री →